gepostet in Redecorate, မဉျြးသား, အလေးအနကျပွော , အရောငျ, လက်မှုပညာ, ပန်းချီဆရာမ, Redecorate, မဉျြးသား, အလေးအနကျပွော, Wand	| No Comments »
အချို့သောအချိန်ပြီးနောက်, ဤပြဿနာရှိသမျှအချိန်. နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်မြို့ရိုးသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမှတ်အသားများကိုဘွား. ခြစ်ခြင်းနှင့်အစွန်းအထင်းသိသိသာသာနှေးကွေးသောများမှာ. ဤအချက်မှာတစ်ဦးတည်းသာအရာကူညီပေးသည် - ဆေးသုတ်အသစ်တစ်ခုအင်္ကျီကိုရှာတွေ့ထားရမညျ. ဒါကစိတ်အညစ်အဖြစ်မှတ်ယူမထားသင့်, အဲဒီအစားအခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း, gleich auch eine Umgestaltung des […]